BE (MESE), Dip (Strategic Management) UK
San Chaung, Yangon., Yangon, Myanmar
Local time: 20:49 MMT (GMT+6.5)
Services Editing/proofreading, Interpreting, Translation, Subtitling
English to Burmese: Role Model for CEOs
Elon Musk asaRole Model for CEOs:
Lessons to be Learned fromaTransformational Innovator
“I’d like to die on Mars, just not on impact.” – Elon Musk
Asasuccessful businessman and unique innovator, Elon Musk has already earnedaplace in the annals of contemporary business history. WithaUSD $28,000 loan from his father, Musk co-foundedaweb software company (Zip2) which was later acquired by Compaq. He took his proceeds from the sale to then create X.com which was subsequently purchased by PayPal. At this point, Musk could have purchasedasmall island and retired quite comfortably asarich, young man. Instead, he invested his wealth into developingaseries of businesses: SpaceX (2002),aspace transport services company focused, in part, on establishing future human colonies on the moon and on Mars; Tesla Inc. (2003),amanufacturer of electric cars; SolarCity (2006),asolar energy services business; OpenAI (2015),anonprofit created to promote safe artificial intelligence; Neuralink (2016),acompany focused on creating brain-computer interfaces, and; The Boring Company (2016),abusiness that develops transportation infrastructure.
After dropping out of Stanford University to pursue his entrepreneurial career in 1995, Musk went fromasmall loan to obtaininganet worth of approximately USD $20 billion in less than 25 years, making him the 53rd richest person in the world. How did he accomplish suchafeat? The answers lay in his career journey, with lessons that would benefit all business leaders as well as those aspiring for similar leadership roles in the future.
Lesson 1: Createalong-term vision for yourself
Asachild, Musk read books about great figures, including those who excelled in scientific innovation. He became determined to beagreat technological innovator himself but understood the limitations of achieving that goal in his surroundings. Therefore, he left his native South Africa to eventually relocate in the United States via Canada. In the U.S., Musk found opportunity recognition – the solution ofaproblem by creatingabusiness. He did so by asking himself what were humanity’s greatest problems? He saw three challenges: the need to createaunifying, user-friendly internet for commerce (later expanded to assuring safe and reliable artificial intelligence), the need to move away from the dependency on fossil fuels by applying clean and renewable energy with electrical vehicles and, finally, the need to offeralong-term possibly against human extinction by exploring space and establishing human colonies.
This was his vision with its own metrics for success and failure. It was and continues to be his driving force and source of motivation. However, Musk was able to communicate the importance of achieving his visionary goals and has inspired others to follow him through his consistent displays of dedication, hard work, confidence, and perseverance.
Lesson 2: Develop exemplary leadership
Musk pushed to developamarket for the electric car when gas-guzzling sport utility vehicles (SUV) were in vogue and atatime when there did not exist in the United States an infrastructure system for electrically charging such vehicles. Yet, employers and financiers followed him because of the inspirational motivation he provided. When Tesla faced bankruptcy due to the economic downturn resulting from the sub-prime mortgage crisis of 2008, Musk stepped in and provided his own funds and kept the automotive company going. In fact, between 2004 and 2008, Musk would invest over USD $66 million of his own money into Tesla. He led by example, working tireless and often slept at his car factory. By 2010, he was ready to present an initial public opening (IPO) of company ownership that generated USD $226 million for Tesla.
SpaceX sufferedaserious setback when its first three rocket launches were failures. The company’s budget had only been for three rocket trials. Undaunted, addressed his employees and stated “I will never give up, and I mean never.” He found funds forafourth rocket (built in six weeks) and its launch witnessed the first privately built rocket to achieve orbit around the Earth.
Beyond inspirational, Musk’s leadership can be seen as transformational since it isacombination of idealized influence and intellectual stimulation with an added focus of individualized consideration wherein the leader acts asamentor and coach while attending to the needs of each of his followers. A true transformational business leader focuses on the promotion of the common good ofacompany and its employees whileafalse leader pretends to do so to enhance his own benefit and financial gain at the expense of the group. Musk achievedanew standard for transformational leadership that is now studied in business schools.
Lesson 3: Continuous development and personal growth
Continuous development is both at the individual level and at the company level. Musk,avoracious reader, read everything he could about the development of an electric car as well as building an effective and efficient rocket after he visited Russia, subsequent to the collapse of the Soviet Union, and discovered the exorbitant spending costs to build the ballistic missiles they had for potential sale. He also hired experts in these areas from around the world and then listened to their counsel. Musk learned all the details involved in his businesses, believing that no task was too menial for him to become familiar. Finally, Musk has always been quick to learn from his trials and errors, successes and failures.
For Musk,agood CEO must be open to all ideas and not be afraid of changing if new information assists in adapting to new situations. He pushed his employees to be creative and innovative – to move away from traditional ways – stating that, “Failure is an option here. If things are not failing, you are not innovating enough.”
When Musk was asked to namearole model, he named Thomas Alva Edison and not the Serbian inventor, Nikola Tesla for whom Musk’s car company was named after (since Tesla had invented the electric motor driven by alternating current). During his life, Tesla filed over 700 patents from wireless communication to fluorescent lighting but died in poverty after failing to bring his inventions to the market and to make them accessible. This is in contrast to Edison and also Benjamin Franklin (inventor and businessman) who Musk also cited asarole model. For Musk, success has never been measured just by the achievement technological innovation but by its commercial application throughaprofitable company. Recently, he stated that the Tesla car company would be worth up to USD$ 700 billion by the year 2026.
Lesson 4: Createacollaborative team
Musk establishedahistory of being quick to fire those who did not possessapassion for working in his businesses. Unhappy people are like cancer cells that then metastasize within the body of the company, consequentially lowering the quality and quantity of production. Musk stated, “Talent is extremely important. It’s likeasports team. The team that has the best individual player will often win but then there’samultiplier from how those players work together and the strategy they employ.” The key is to hire with care by placing the right personnel in their proper roles and then establishing high standards followed by meaningful rewards. Musk has been criticized for being too much ofamicromanager. However, his companies have been pioneering efforts and within that context it is difficult to understand whyafounder would not engage in micromanagement as new processes and procedures are set in place and then refined. For Musk this involved even having the final say as to the seat designs and transmissions of his cars.
Lesson 5: Establishapersonal brand of integrity
Recently, when challenged by the short-term concerns of hedge fund managers and day traders who complained that Tesla was not generatingaprofit and that its stock was too volatile, Musk simply replied that these types of investors should not buy shares of his car company, an extraordinary and, perhaps, unique statement fromaCEO. However, this action did not have any long-term effect on Tesla stock and, eventually, it actually rose. This is because part of the Musk mystique is his blunt honesty.
In 2012, when Republican presidential candidate Mitt Romney debated President Obama atanationally televised event, he criticized the Obama administration who providing Tesla withaUSD $465 million loan to developaclean energy alternative by way of Tesla’s electric car. During the debate, Romney referred to Tesla asa“loser” and implied that Musk would never repay the load. Romney was the loser in that election. However, Musk did, indeed, repay the loan, nine years ahead of schedule and with an additional USD $20 million in interest to the government.
Throughout his journey in the business world, Musk created and has maintainedapersonal brand of honesty and transparency. This is why his followers and investors have stuck with him through periods of economic instability and bottom lines of income statements that ended in red. Musk strives for long-term profitability even as his companies currently benefit his investors by way of steady appreciation in stock values. However, he has been consistently honest that his vision is evolutionary. Musk confessed that, “Most people, when they makealot of money don’t want to risk it. For me, it was never about money but solving problems for the future of humanity.” This honesty has attracted those who are also long-term oriented and who follow Musk’s prediction that in less than thirty years, the majority of cars manufactured in the U.S. will be fully electric and that by 2040ahuman colony will have been established on Mars.
CEO တွေအတွက် အတုယူထိုက်သူ Elon Musk
ပြောင်းလဲ ဆန်းသစ်တီထွင်သူတစ်ယောက်ဆီက သင်ယူစရာ သင်ခန်းစာများ
“ကျွန်တော် မာ့စ်ဂြိုဟ်ပေါ်မှာ သေချင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီဂြိုဟ်ပေါ်ဆင်းနေတုန်း မသေချင်တာပါ။” – Elon Musk
Elon Musk က အောင်မြင်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်၊ ထူးခြားဆန်းသစ်တီထွင်သူ တစ်ယောက်အဖြစ် မျက်မှောက်ခေတ် စီးပွားရေးသမိုင်းမှာ မှတ်တမ်းတင်ခံရပြီး ဖြစ်ပါတယ်။ သူ့အဖေဆီက ဒေါ်လာ ၂၈,၀၀၀ ချေးယူပြီး Elon Musk က ဝက်ဘ်ဆော့ဖ်ဝဲလ် ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Zip2 ကို ပူးပေါင်းထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ကုမ္ပဏီကို နောက်ပိုင်းမှာ Compaq က ဝယ်ယူလိုက်ပါတယ်။ သူကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီကို ရောင်းရတဲ့ငွေနဲ့ X.com ကို တည်ထောင်ခဲ့တယ်။ X.com ကိုနောက်ပိုင်းမှာ PayPal က ဝယ်ယူခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ Musk က ကျွန်းငယ်လေးတစ်ခုကို ဝယ်ပြီး ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ သက်သောင့်သက်သာ အငြိမ်းစားယူလို့ ရပါတယ်။ အဲ့ဒီအစား သူက လုပ်ငန်းတွေအများကြီးကို တည်ထောင်ဖို့ သူ့ငွေတွေကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတွေကတော့ - အာကာသ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ဝန်ဆောင်မှုကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီး တစ်စိတ်တစ်ဒေသအနေနဲ့ လကမ္ဘာနဲ့ Mars ဂြိုဟ်မှာ အနာဂတ်မှာ လူတွေနေထိုင်နိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ တည်ထောင်ထားတဲ့ SpaceX (2002)၊ လျှပ်စစ်ကားတွေကို ထုတ်လုပ်တဲ့ Tesla Inc. (2003)၊ နေစွမ်းအင် ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ SolarCity (2006)၊ လုံခြုံတဲ့ Artificial Intelligence ကိုအားပေးဖို့ အကျိုးအမြတ်အတွက် မဟုတ်ဘဲ တည်ထောင်ထားတဲ့ OpenAI (2015)၊ ဦးနောက်နဲ့ ကွန်ပျူတာ ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်မှုကို လုပ်ဆောင်တဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ Neuralink (2016)၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစနစ်တွေကို ဖန်တီးတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့ The Boring Company (2016) စတာတွေဖြစ်ပါတယ်။
သူ့ရဲ့ စွန့် ဦးတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်ဘဝကို လျှောက်လှမ်းဖို့ ၁၉၉၅ မှာ စတန်းဖို့ဒ် တက္ကသိုလ်ကနေ ထွက်လိုက်ပြီး Musk က သူချေးယူလိုက်တဲ့ ငွေအနည်းငယ်ကနေ ၂၅နှစ်အတွင်း ဒေါ်လာ ၂၀ ဘီလီယံလောက်အထိ ကြွယ်ဝချမ်းသာလာခဲ့ပါတယ်။ သူက ကမ္ဘာ့အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာ အဆင့် ၅၃ နေရာမှာရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီလို အရာမျိုးကို သူဘယ်လို ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တာလဲ။ အဖြေတွေကို သူ့ရဲ့ အလုပ်သက်တမ်း တစ်လျှောက်မှာ တွေ့နိုင်ပြီး စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်အားလုံးအတွက် နဲ့ အနာဂတ်မှာ ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်လာဖို့ ဆန္ဒရှိကြတဲ့ သူအာလုံးအတွက် အကျိုးရှိစေတဲ့ သင်ခန်းစာတွေရှိ ပါတယ်။
သင်ခန်းစာ ၁။ သင့်အတွက် ရေရှည် စိတ်ကူး (Long-term Vision) တစ်ခု ဖန်တီးထားရှိပါ
Musk က ငယ်ရွယ်စဥ်မှာ သိပ္ပံပညာမှာ ဆန်းသစ်တီထွင်သူတွေအကြောင်းအပြင် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခဲ့ သူတွေ အကြောင်းကို ရေးသားထားတဲ့ စာအုပ်တွေကို ဖတ်ပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင် နည်းပညာမှာ ဆန်းသစ်တီထွင်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်လာဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အဲ့ဒီပန်းတိုင်ကို အကောင် အထည်ဖော်နိုင်ဖို့ အဟန့်အတားတွေရှိတယ်ဆိုတာ သူနားလည်လာခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် သူ့ရဲ့အမိမြေ ဖြစ်တဲ့ တောင်အာဖရိကကို စွန့်ပြီး ကနေဒါကတစ်ဆင့် နောက်ပိုင်းမှာ U.S. ကို ပြောင်းရွှေ့နေထိုင် ခဲ့ပါတယ်။ U.S. မှာ Musk က အခွင့်အလမ်းတွေကို အသိအမှတ်ပြုခြင်း (opportunity recognition) ဖြစ်တဲ့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ဖန်တီးခြင်းအားဖြင့် ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းခြင်းကို နားလည်ခဲ့တယ်။ သူက သူ့ကိုယ်သူ ဘယ်အရာတွေက လူသားတွေရဲ့ အကြီးမားဆုံး ပြဿနာတွေလဲ ဆိုပြီး မေးမြန်းခဲ့တယ်။ သူ စိန်ခေါ်မှု ၃ ခုကို တွေ့ခဲ့တယ် - ကုန်သွယ်မှုတွေအတွက် စည်းလုံးညီညွတ်စွာပေါင်းစီးပြီး အသုံးပြုရလွယ်ကူတဲ့ အင်တာနက်ကို ဖန်တီးဖို့ လိုအပ်ချက် (နောက်ပိုင်းမှာ လုံခြုံပြီး စိတ်ချရတဲ့ Artificial Intelligence ကို သေချာစေဖို့အထိပါ တိုးချဲ့ခဲ့တယ်)၊ လျှပ်စစ်အသုံးပြု ယာဥ်တွေမှာ သန့်ရှင်းပြီး ပြန်လည်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ စွမ်းအင်ကို အသုံးချခြင်းအားဖြင့် သဘာဝ လောင်စာဆီကို မှီခိုနေရမှုကနေ ပြောင်းလဲဖို့ လိုအပ်ချက်၊ လူသားမျိုးနွယ်စု မပျောက်ကွယ်သွားအောင် အာကာသကို စူးစမ်းရှာဖွေပြီး ရေရှည်မှာ တခြားဂြိုဟ်တွေမှာ လူတွေနေထိုင်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ချက် တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒါက အောင်မြင်မှုနဲ့ ကျရှုံးမှုအတွက် သူ့ကိုယ်ပိုင်စံနှုန်းတွေရှိတဲ့ သူ့ရဲ့စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက သူ့ကို တွန်းအားပေးပြီး လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေတဲ့ အရာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ Musk က သူ့ရဲ့ စိတ်ကူးပန်းတိုင်တွေ အောင်မြင်ဖို့ အရေးကြီးမှုကို ဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ပြီး သူ့ရဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၊ စိတ်ရောကိုယ်ပါ နှစ်မြှုပ်ထားမှု၊ ယုံကြည်မှု၊ နဲ့ မဆုတ်မနစ်သောလုံ့လတို့ကို အမြဲတင်ပြခြင်းအားဖြင့် တခြားသူတွေ သူ့နောက်ကို လိုက်ဖို့ လှုံ့ဆော်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
သင်ခန်းစာ ၂။ စံထားထိုက်တဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုကို ပျိုးထောင်ပါ
Musk က ဆီစားတဲ့ ပြိုင်ကားတွေ ရေပန်းစားပြီး U.S. မှာ လျှပ်စစ်ကားတွေအတွက် အားသွင်းဖို့ စနစ်တွေ မရှိသေးတဲ့ အချိန်မှာပင် လျှပ်စစ်ကားတွေအတွက် စျေးကွက်ကို ဖန်တီးဖို့ အားထုတ်ခဲ့တယ်။ လူတွေကို လှုံ့ဆော်နိုင်တဲ့အတွက် လုပ်ငန်းရှင်တွေ နဲ့ ငွေရှင်တွေက သူ့နောက်ကို လိုက်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် အပေါင်အနှံကိစ္စတွေကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ စီးပွားပျက်ကပ်အတွင်း Tesla က ဒေဝါလီခံရတော့မယ့် အချိန်မှာ Musk က ကြားဝင်ပြီး ကုမ္ပဏီဆက်လက် ရှင်သန်နိုင်ဖို့ သူ့ကိုယ်ပိုင် ငွေနဲ့ ပံ့ပိုးပေးခဲ့တယ်။ ၂၀၀၄ နဲ့ ၂၀၀၈ ခုနှစ်အတွင်းမှာ Musk က Tesla ကုမ္ပဏီအတွက် သူ့ကိုယ်ပိုင်ငွေ ဒေါ်လာ ၆၆ သန်းကျော်ကို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့တယ်။ သူကသူ့ပုံသက်သေအားဖြင့် ဦးဆောင်ခဲ့တယ်။ မမောနိုင်မပန်းနိုင် အလုပ်လုပ်ပြီး သူ့ကားစက်ရုံမှာ မကြာခဏ အိပ်လေ့ရှိတယ်။ ၂၀၁၀ မှာ Tesla ကုမ္ပဏီရဲ့ စတော့ခ်တွေကို ထုတ်ရောင်းခြင်းအားဖြင့် ကုမ္ပဏီအတွက် ဒေါ်လာ ၂၂၆ သန်း ကိုရယူနိုင်ခဲ့တယ်။
SpaceX ကုမ္ပဏီက ပထမဦးဆုံး လွှတ်တင်ခဲ့တဲ့ ဒုံးပျံ သုံးခု မအောင်မြင်တဲ့အခါ ကြီးကြီးမားမား အခက်တွေ့ ခဲ့တယ်။ ကုမ္ပဏီရဲ့ သတ်မှတ်အသုံးစရိတ်က အစမ်းလွှတ်တင်ဖို့ ဒုံးပျံ သုံးခု အတွက်သာဖြစ်တယ်။ သူကမတုန်လှုပ်ပဲ သူ့ရဲ့ဝန်ထမ်းတွေကို ခေါ်ပြီး “ငါ ဘယ်တော့မှ အရှုံးမပေးဘူး၊ ငါဆိုလိုတာက ဘယ်တော့မှကို အရှုံးမပေးဘူးဆိုတာ ဖြစ်တယ်” ဆိုပြီး ပြောခဲ့တယ်။ သူက စတုတ္ထ ဒုံးပျံအတွက် လိုအပ်ငွေကို ရယူနိုင်ခဲ့ပြီး (ဒုံးပျံကို ၆ ပတ်အတွင်း တည်ဆောက်ခဲ့တယ်) အဲ့ဒီဒုံးပျံဟာ ပုဂ္ဂလိက ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ကမ္ဘာဂြိုဟ်ရဲ့ ပတ်လမ်း (Earth’s orbit) အထိ အောင်မြင်စွာလွှတ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ပထမဦးဆုံး ဒုံးပျံဖြစ်ခဲ့တယ်။
Musk ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုက လှုံ့ဆော်မှုပေးနိုင်တာလောက်သာမကပဲ အပြောင်းအလဲတွေ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုက စံထားလောက်တဲ့ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနဲ့ စဥ်းစားတွေးခေါ်မှုတွေကို လှုံ့ဆော်ပေးနိုင်ပြီး တစ်ဦးချင်းစီကိုပါ အာရုံစိုက်စဥ်းစားပေးပါတယ်။ ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ လမ်းညွှန်ပေးသူ၊ နည်းပြ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့ အပြင် သူ့နောက်လိုက်တွေရဲ့ လိုအပ်ရာတွေကိုလည်း အာရုံစိုက်လုပ်ဆောင်ပေးပါတယ်။ အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေတဲ့ စစ်မှန်တဲ့ စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်က ကုမ္ပဏီနဲ့ သူ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ကောင်းကျိုးကို အာရုံစိုက်ပြီး အစစ်အမှန်မဟုတ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်က ဝန်ထမ်းနဲ့ကုမ္ပဏီကို အသုံးချပြီး သူ့ကိုယ်ကျိုး နဲ့ ငွေရရှိမှုအတွက် ဟန်ဆောင်လုပ်ကိုင်ပါတယ်။ Musk က အပြောင်းအလဲဖြစ်စေတဲ့ ခေါင်းဆောင်မှုစံနှုန်း အသစ်ကို ချမှတ်နိုင်ခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကို စီးပွားရေးကျောင်းတွေမှာ လေ့လာဆီးပူး ကြပါတယ်။
သင်ခန်းစာ ၃။ ဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တိုးတက်လာမှု
ဆက်လက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုက တစ်ဦးတစ်ယောက်စီအတွက်ရော ကုမ္ပဏီအတွက်ပါ ဖြစ်သင့်ပါတယ်။ Musk က စာကို လိုချင်မှုပြင်းပြင်းပြပြနဲ့ ဖတ်ပါတယ်။ သူက လျှပ်စစ်ကားကို ဖန်တီးမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့ စာအုပ်တွေနဲ့ ထိရောက်ထက်မြက်တဲ့ဒုံးပျံတွေကို တည်ဆောက်မှုနဲ့ ဆိုင်တဲ့စာအုပ်တွေကို တတ်နိုင်သမျှဖတ်ပြီး ဆိုဗီယက် ပြည်ထောင်စု ပျိုကွဲပြီးနောက်ပိုင်း သူ Russia ကို လည်ပတ်ခဲ့ပြီးနောက် သူတို့ (Russia) ရောင်းဖို့ လုပ်နေတဲ့ ပဲ့ထိန်းစနစ်ပါတဲ့ ဒုံးကို သူတို့တည်ဆောက်တုန်းက မတန်မဆကုန်ကျကြောင်း သူတွေ့ရှိခဲ့တယ်။ သူက ဒီနယ်ပယ်တွေမှာ ကျွမ်းကျင်တဲ့ ကမ္ဘာတစ်ဝန်းက သူတွေကို ငှားပြီး သူတို့ရဲ့ အကြံပေးမှုတွေကို နားထောင် ခဲ့တယ်။ သူနားလည်သဘောပေါက်ဖို့ ဆောင်ရွက်မှုမှန်သမျှကို သူ့အတွက် သေးဖွဲပြီးအရေးမပါတဲ့ အလုပ်လို့မမြင်ပဲ သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ ဆိုင်တဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်အားလုံးကို Musk ကသင်ယူပါတယ်။ Musk က အမြဲတမ်း သူ့ရဲ့စမ်းသပ်မှုတွေ၊ အမှားတွေ၊ အောင်မြင်မှုတွေ၊ ကျရှုံးမှုတွေကနေ အလျင်အမြန် သင်ယူခဲ့ပါတယ်။
Musk အတွက်က CEO ကောင်းတစ်ယောက်ဟာ အကြံဉာဏ်တွေအာလုံးကို လက်ခံဖို့ အသင့်ရှိရမှာဖြစ်ပြီး အခြေအနေအသစ်တွေနဲ့ လိုက်လျောညီထွေမှုရှိဖို့ အချက်အလက်အသစ်တွေက အထောက်အကူဖြစ်စေတယ် ဆိုရင် ပြောင်းလဲမှုလုပ်ဖို့မကြောက်ရွံ့ရပါဘူး။ သူက သူ့ရဲ့ ဝန်ထမ်းတွေကို ဆန်းသစ်တီထွင်ဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်။ သမားရိုးကျနည်းတွေကို စွန့်လွှတ်ဖို့ “ဒီမှာ ကျရှုံးမှုကို လက်ခံပါတယ်။ အကယ်၍ သင်လုပ်တဲ့အရာတွေက ကျရှုံးမှုမရှိဘူးဆိုရင် သင်လိုအပ်သလောက် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမရှိသေးဘူး” ဆိုပြီး တိုက်တွန်းပါတယ်။
Musk က သူ့ရဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်သူလဲ လို့ မေးမြန်းခံရတဲ့အခါ သူ့ကုမ္ပဏီနာမည်မှာ မှည့်ထားတဲ့ တီထွင်သူ ဆားဗီးယားလူမျိုး Nikola Tesla (Tesla က AC (Alternating current) လျှပ်စစ်နဲ့မောင်းနှင်နိုင်တဲ့ လျှပ်စစ်မော်တာ ကို တီထွင်ခဲ့တယ်) အစား Thomas Alva Edison ကို ဖော်ပြခဲ့တယ်။ သူ့ဘဝ သက်တမ်းတစ်လျှောက်မှာ Tesla က ကြိုးမဲ့ဆက်သွယ်မှုကနေ မီးချောင်းတွေအထိ တီထွင်မှု မူပိုင် ၇၀၀ ကျော်ကို မှတ်ပုံတင်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့တီထွင်မှုတွေကို စျေးကွက်ထဲတင်ပြီး လူတွေအသုံးပြုနိုင်အောင် မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက် သူဆင်းဆင်းရဲရဲ သေဆုံးခဲ့ရတယ်။ ဒါဟာ Musk က စံပြပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ဖော်ပြ ထားတဲ့ Edison ၊ Benjamin Franklin (တီထွင်သူ၊ လုပ်ငန်းရှင်) တို့နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တယ်။ Musk အတွက်ကတော့ အောင်မြင်မှုဆိုတာ နည်းပညာဆန်းသစ်တီထွင်မှုနဲ့သာ တိုင်းတာ တာမဟုတ်ဘဲ အကျိုးအမြတ် ရရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုကတစ်ဆင့် စီးပွားဖြစ်ထွန်းအောင် အသုံးချနိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သိပ်မကြာခင်က Tesla ကားကုမ္ပဏီဟာ ၂၀၂၆ ခုနှစ်မှာ ဒေါ်လာ ၇၀၀ ဘီလီယံအထိ တန်ဖိုးတက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သူက ပြောဆိုပါတယ်။
သင်ခန်းစာ ၄။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်တဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုကို ဖွဲ့ပါ
Musk က သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းမှာ အလုပ်လုပ်ဖို့ ဆန္ဒမပြင်းပြသူတွေကို အလျင်အမြန်ဖြုတ်ပစ်တဲ့ သမိုင်းရှိပါတယ်။ မပျော်ရွှင်တဲ့သူတွေဟာ ကင်ဆာဆဲလ်တွေနဲ့ တူပြီး ကုမ္ပဏီအတွင်း ပျံ့ပွားသွားစေပါတယ်။ အဲ့ဒီကတစ်ဆင့် ထုတ်လုပ်မှု အရည်အသွေးနဲ့ အရေအတွက်ကို ကျဆင်းစေပါတယ်။ Musk ပြောတာက “ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါက အားကစား အဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တူပါတယ်။ တစ်ကိုယ်တော်စွမ်းရည်တွေရှိတဲ့ အကောင်းဆုံးကစားသမားတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ အသင်းဟာ မကြာခဏနိုင်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီကစားသမား တွေဘယ်လို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သလဲ၊ ဘယ်လို ဗျူဟာကို သူတို့အသုံးပြုသလဲ ဆိုတဲ့အပေါ် မူတည်ပြီး အောင်မြင်မှုက ဆတိုးဖြစ်ပါတယ်။ အဓိကသော့ချက်က သင့်တော်တဲ့နေရာမှာ သင့်တော်တဲ့ ဝန်ထမ်းကိုထားရှိဖို့ ဂရုတစိုက် ငှားရမှာဖြစ်ပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ ဆုချီးမြှင့်မှုတွေပြုလုပ်ပေးပြီး မြင့်မားတဲ့ စံနှုန်းကို သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Musk က လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာ အသေးစိတ်ကအစ ဝင်ရောက်ပါဝင်တဲ့ အတွက် မကြာခဏ ဝေဖန်ခံရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ ကုမ္ပဏီတွေက အသစ်အသစ်သော အရာတွေကို လုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက် အဲ့ဒီလို အခြေအနေမျိုးမှာ လုပ်ငန်းစဥ်အသစ်တွေ လုပ်ထုံးလုပ်နည်း အသစ်တွေကို အသုံးချပြီး ပြန်လည်မွမ်းမံမှုတွေ ပါဝင်နေတဲ့အတွက် လုပ်ငန်းတည်ထောင်သူ တစ်ယောက်က ဘာကြောင့် အသေးစိတ်လိုက်ပြီးဆောင်ရွက်မှု မပြုလုပ်သင့်ကြောင်း နားလည်ဖို့ ခက်ပါတယ်။ Musk အတွက်ကတော့ ဒါက ကားခုံဒီဇိုင်းတွေ၊ သူ့ကားတွေကို သယ်ပို့မှုစတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို သူကိုယ်တိုင်ချတဲ့ အထိ ပါဝင်ပါတယ်။
သင်ခန်းစာ ၅။ ကိုယ်ရဲ့ တည်ကြည်မှန်ကန်မှု အမှတ်အသားကို တည်ဆောက်ပါ
မကြာသေးခင်က ရေတိုကို ကြည့်တဲ့ Hedge Fund မန်နေဂျာတွေနဲ့ Day Trader တွေက Tesla ဟာ ဘာအကျိုးအမြတ်မှ မထုတ်လုပ်နိုင်ဘူး ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ စတော့ခ်ကလည်း အပြောင်းအလဲမြန်တယ်လို့ ပြောဆိုခံရတဲ့အခါ Musk က ဒီလို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဟာ သူ့ကုမ္ပဏီရဲ့ ရှယ်ယာတွေကို မဝယ်သင့်ပါဘူးလို့ ရိုးရိုးလေးဘဲ ပြန်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဒါက CEO တစ်ယောက်ဆီကနေ ပြန်ဖြေလိုက်တဲ့ ထူးခြားတဲ့ အဖြေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီလုပ်ရပ်က Tesla ကုမ္ပဏီရဲ့ စတော့ခ်တွေအပေါ် ရေရှည်အကြိုးသက်ရောက်မှု မရှိဘဲ နောက်ပိုင်းမှာ စတော့ခ်တန်ဖိုးတွေ တက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါက Musk ရဲ့ ဗြောင်ကျတဲ့ ရိုးသားပွင့်လင်းမှုနဲ့လည်း တစ်စိတ် တစ်ဒေသ သက်ဆိုင်ပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ပြည်တွင်းရုပ်သံမှာ ထုတ်လွှင့်ပြသခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုမှာ ရွေးကောက်ပွဲဝင် ရီပဗ္ဗလီကန် ကိုယ်စားလှယ်လောင်း Mitt Romney က သမ္မတ Obama နဲ့ အငြင်းအခုံပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သူက သမ္မတ Obama ဟာ Tesla လျှပ်စစ်ကားကို ထုတ်လုပ်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းတဲ့ စွမ်းအင်အသုံးပြုမှုကို အကောင်အထည် ဖော်ဖို့ Tesla ကုမ္ပဏီကို ဒေါ်လာ ၄၆၅ သန်း ထုတ်ချေးပေးလိုက်တဲ့အတွက် ဝေဖန်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ ငြင်းခုံဆွေးနွေးမှုမှာ Romney က Tesla ကို “အရှုံးသမား” လို့ ပြောဆိုပြီး Musk က အကြွေးကို ဘယ်တော့မှ ပြန်ဆပ်မှာ မဟုတ်ဘူးလို့ပြောခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ Musk က အဲ့ဒီအကြွေးကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကာလထက် ၉ နှစ်ပိုစောပြီးပြန်ဆပ်တဲ့အပြင် အစိုးရကို ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ အတိုးပါ ပေးခဲ့ပါတယ်။
စီးပွားရေးလောကမှာ သူ့ရဲ့ ခရီးတစ်လျှောက် Musk ဟာ ရိုးသားမှုနဲ့ ပွင့်လင်းမှုမှာ ကိုယ်ပိုင်အမှတ်အသားကို ထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် သူ့နောက်ကို လိုက်တဲ့သူတွေနဲ့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေက စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်တဲ့ အခြေအနေတွေမှာနဲ့ ကုမ္ပဏီ ဝင်ငွေ အနုတ်ပြနေတဲ့အခါတွေမှာ သူနဲ့ဆက်လက်တွဲခဲ့ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ကုမ္ပဏီတွေက လက်ရှိမှာ စတော့ခ်တန်ဖိုးတွေ တစ်ဖြည်းဖြည်း တက်လာခြင်းအားဖြင့်သာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေအတွက် အကျိုးပြုနေပေမဲ့ Musk က ရေရှည် အကြိုးအမြတ်အတွက် ကြိုးစားအားထုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူ့ရဲ့ စိတ်ကူးတွေက တစ်စတစ်စအကောင်အထည်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုတော့ သူက အမြဲတမ်း ရိုးရိုးသားသား ဝန်ခံပါတယ်။ “လူအများစုက သူတို့ ဝင်ငွေအများကြီး ရရှိပြီးသွားတဲ့ အခါ အဲ့ဒီငွေတွေကို အဆုံးရှုံးမခံချင်ကြဘူး။ ကျွန်တော့်အတွက်ကတော့ ဒါက ဘယ်တော့မှ ပိုက်ဆံအတွက်မဟုတ်ပါဘူး။ လူသားတွေရဲ့ အနာဂတ်အတွက် ပြဿနာတွေကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်” လို့ Musk ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဒီရိုးသာမှုက ရေရှည်ကို ကြည့်တဲ့ သူတွေကို ဆွဲဆောင်ပြီး လာမယ့် နှစ်၃၀ အတွင်းမှာ U.S. မှာ ထုတ်လုပ်မယ့် ကားအများစုက လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ကို အသုံးပြုမှာြဖစ်ပြီး လာမယ့် ၂၀၄၀ မှာ မာ့စ်ဂြိုဟ်ပေါ်မှာ လူ့အဖွဲ့အစည်းကို တည်ထောင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သူ့ရဲ့ ကြိုတင် ပြောဆိုချက်တွေကို သဘောတူကြတဲ့ လူတွေကို ဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
My name is Yar Mae Kay Sheng, and I amanative Burmese.
I offer translation and interpretation services for English and Burmese language pair. My goal is to help you navigate in Myanmar business world by bridging the language barrier, and support you to seize the business opportunities, and assist your business to succeed.
I believe I am the right professional that can provide you with quality services and deliver quality results for the following reasons:
1. Language expertise: I amalinguist. I love different languages and cultures. I am educated in both English and Burmese languages.
2. Credentials: I holdabachelor degree in Marine Electrical and Electronic engineering. I will also receiveaDiploma in Strategic Management awarded by the Institute of Commercial Management (UK). This helps me in serving my clients because I not only understand real-world conversational English but also technical and business English.
3. Proven records: I have over four years of experience in translation and interpretation services. The testimonials from my various clients can also be found on my website www.ymtranslation.com.
4. Commitment to excellence: I am fully committed to provide my clients with the best quality services possible. I am always looking for ways to improve my service.
5. My ultimate goal is for your business to succeed.
Keywords: English to Burmese translator, English to Burmese interpreter, English to Burmese translation service, Burmese translator, Burmese translation,